Robot Trading • Gold, Mmanụ, Forex & Crypto • Ule & Nyocha
Bots azụmaahịa & Cryptobots
Thedị azụmaahịa nke ụlọ ọrụ azụmaahịa na-enye ndị na-etinye ego ohere isonye na ahịa azụmaahịa nke ego, ngwa ahịa, ọla dị oke ọnụ na cryptocurrencies. Site na ígwè ọrụ azụmaahịa a na-enye, ịchọghị ahụmịhe ma ọ bụ nka ọ bụla na ego ma ọ bụ mmepe IT. Yabụ ka algorithms azụmaahịa na-elekọta isi obodo gị anya na nke ọma, anyị ahọrọla ha maka nke ahụ.
Site n'obiọma, m ga-eduzi gị ma zaa ajụjụ gị, ma buru n'uche na ihe ize ndụ nke ịnwụ dị ka ihe dị mkpa dị ka ego a na-enweta. Naanị tinye ego ole ị dị njikere ida. Malite ma nwalee rọbọtị ndị a chọrọ iji obere ego mmalite iji ghọta atụmatụ ha.
Obere ihe ọmụma achọrọ
Nweta ego na-akpaghị aka site na iji amamihe etinye ego.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị ga-eme!
Debanye aha gị, tinye ego gị ka ndị robots zụọ ahịa maka gị.
Ego ị na-enweta mgbe niile
Na-anakọta ego ị na-enweta mgbe niile na ego gị niile n'oge niile.
Robots ịzụ ahịa na ohere ego
Robot a na-ere ahịa nwalere ọtụtụ ọnwa, tụkwasịrị obi ma rụọ ọrụ nke ọma
Ebe ọ bụ na ịzụ ahịa akwụsịla ịbụ ikike nke ndị ọkachamara, rọbọt ndị na-azụ ahịa abanyela n'Intanet ma nwee ike ịkpata uru ego maka ndị mmadụ n'otu n'otu. Robots ndị a aghọwo ndị ewu ewu maka ịzụ ahịa na-akpaghị aka, n'aha ndị ọrụ ha, na-azọpụta ha oge bara uru. Dị ka e nwere ọtụtụ scams na isiokwu a, anyị na-anwale, nyochaa na ndụmọdụ ụfọdụ bots trading karịa ndị ọzọ.
A pụrụ ịdabere na robot
Ezubere ya iji gbanye ụzọ XAU / USD na njikwa ihe egwu dị ala na usoro mkpụmkpụ mkpụmkpụ. Scalping raara nye ahịa ọla edo.
Ezubere iji zụọ ahịa cryptocurrency na tumadi Bitecoin BTC nwere nnukwu mgbanwe ahịa.
Dị na 2022
AutoTrade Forex bụ Indonesian ego ahịa dabere trading robot. Autotrade Forex ga-adị n'oge ọkọchị nke 2021.
Ezubere ya iji ahia ahia mmanụ. Mmanụ Autotrade ga-agba nzọ ma ọ bụ ala dabere na ọnụahịa mmanụ mmanụ.
Fin 888 bụ robot ahia Indonesian dabere na ahia ego fiat. Fin888 bụ rọbọt kwụsiri ike mana ọ naghị arụ ọrụ karịaAutotrade Gold.
Ecosystem nke robots 18 gụnyere 2 na crypto jikọtara na API Binance. A ga-ejikọta bots ndị ọzọ na nke broker Equiti na-achịkwa.
Ezubere iji zụọ ụzọ abụọ EUR / USD, ụdị ọrụ mbụ nke SmartXBot dabere na omume na ịzụ ahịa nke ọnọdụ dị mkpirikpi. Ọdịchaghị mma karịa ATG.
Robot ndị a pụrụ ịdabere na ya
Otu n'ime mgbanwe kachasị mma na-enye atụmatụ 4 robot dịka ụzọ abụọ ego chọrọ.
Zigharịa nke ọma
Sistemụ maka ịzụrụ ọla edo na ola diamond na ịkwụ ụgwọ na ego Fiat, mbufe ma ọ bụ crypto.
✅ Goldna Wayzọ
Ndị Indonesian na-azụ ahịa robot na-azụ ahịa ahịa ọla edo. Usoro nkekọrịta uru dị ka Smartxbot.
Indonesian ahia robot ahia ahia crypto na ebe broker Lotus International.
Robot azụmaahịa dabere na ahịa Forex.
Ezubere iji gbanye ụzọ EUR / USD, Coved bụ otu n'ime ngwanrọ kachasị mma jikọtara na ọgụgụ isi na otu n'ime teknụzụ njikwa ihe egwu kachasị elu.
Ezubere ya iji gbanye ụzọ EUR / USD na njikwa ihe egwu dị ala na usoro mkpụmkpụ mkpụmkpụ.
Ezubere iji zụọ ahịa ego abụọ, Elitrob na-enyocha ahịa Forex, na-achọ ọkwa ọkwa na mpaghara nwere nnukwu ohere.
A na-eme ya iji zụọ ahịa ego abụọ na mkpuchi n'okpuru atụmatụ ịkpụ na ịzụ ahịa ụbọchị.
Ro Bit Robot
Usoro nkwụghachi ụgwọ nke mgbasa ozi.
Marketing Azụmaahịa AI
Chọpụta mmadụ 3 na - eme ọfụma na - azụ ahịa na azụmaahịa ụbọchị nke ndị ahịa azụmaahịa 12 na - achịkwa ma na - azụ ahịa ego ego.
Nweta nkwalite na nlekota nke ụfọdụ rọbọtụ azụmaahịa
Anyị na-enyocha ụfọdụ ere robot na ndị ọzọ adịghị ka anyị nwere ntụkwasị obi na-adigide ka oge na-aga. Nke a bụ ndepụta robots azụmaahịa na-adịghị agwụ agwụ anyị na-esochi anya: Smart Evo, Maestrem, GoldNke m, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionaire Prime, Dragọn, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Zere robots ndị a na-ere ahịa (Scams / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Ọbụna ndị ahịa kachasị mma na-adabere na ígwè ọrụ na-akpali iwu ha n'ahịa.
Ha na-eme ọsọ ọsọ karị, gbakọọ ọsọ ọsọ karị, ha enweghị mmetụta ọ bụla.
Akụrụngwa azụmaahịa akpaka bụ sistemụ na-akpaghị aka nke na-arụ ọrụ dịka oke ma ọ bụ usoro nhazi nke ndị otu ahịa ha setịpụrụ. Ozugbo ejikọtara na akaụntụ ahịa gị, robot ga-akpaghị aka n'ọnọdụ ahịa na ahịa ego na-enweghị enyemaka mmadụ ọ bụla, nke na-ewepụ njehie nke mmetụta uche mmadụ.
Ejiri sọftụwia a na ebumnuche nke ịmezi usoro azụmaahịa na ịnweta uru na-adigide, yana ezigbo ihe egwu / nloghachi. Algọridim ndị a jikọtara na ọgụgụ isi na-enyocha ahịa mgbe niile, na-emepe ma na-akpachi aka na ezigbo njikwa ego (nkwụsị kacha elu nke 3%), na-eji ntuziaka dabere na mgbakọ na mwepụ, ọnụ ọgụgụ na akara ngosi ahịa. onye nwere ihe mmụta.
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, dị ka Meta Capital ewepụtala ọtụtụ mmekorita ya na ndị ọkachamara dị iche iche na ngalaba nke ịzụ ahịa akpaghị aka.
Robot ọ bụla nwere atụmatụ azụmaahịa nke ya dabere na ahịa ebumnuche ya. A na-enyocha ha mgbe niile, na-emelite dị ka akụkọ akụ na ụba si dị na ndị otu ọkachamara na-azụ ahịa.
Usoro njikarịcha a na-aga n'ihu dị mkpa iji hụ na nsonaazụ ogologo oge na-aga nke ọma. Ahịa Forex bụ ihe dị oke mmiri ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Nkwalite ọkwa a na-eme ka o doo anya na algọridim na-anọ n'elu na ihe niile na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị.
"Ọ bụrụ na ị bụ ụwa ọhụrụ nke azụmaahịa azụmaahịa, nara ndụmọdụ m: nzọ ego ị chọghị, ka onye ahịa ahụ nakọtara mmeri gị ruo mgbe ị nwetara akara mbụ gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, naanị Daashi. "
Atụmatụ ego onwe onye
Robot / Crypto / Ndokwa.
Nke a bụ otu n'ime atụmatụ itinye ego iji nweta ego na-enweghị ego ma na-agbanwe agbanwe dịka o kwere mee:
Jiri otu igwe ma ọ bụ karịa na-ere ahịa site na itinye ego na brokers iche.
Site na uru a rụpụtara, zụta cryptocurrencies na mgbanwe ndị isi (Binance, Coinbase ma ọ bụ Crypto.com).
Zụrụ ahịa ma ọ bụ jide gị cryptocurrency iji wepụta mmasị kwa ọnwa na / ma ọ bụ zụta ngwaahịa na ọrụ kwa ụbọchị na crypto gị dị ka Binance kaadị maka ịzụ ahịa nri, isi isi, mmanụ ụgbọala, ndenye aha na ntụrụndụ ...
Rịbaị na arụmọrụ azụmaahịa
Tinye ego ma gbasawanye
Mụtakwuo banyere ịzụ ahịa ụgbọ ala
4 ajụjụ / azịza
Gini mere iji jiri robot ahia gbanye ego gi?
Itinye ego na robot azụmaahịa bụ ụzọ na-ewu ewu nke nwere ike ịba uru. Yabụ, azụmaahịa dị elu pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke iwu enyere na France yana 70% nke iwu enyere na USA. Ọnụ ọgụgụ ndị a gosipụtara n'ụzọ doro anya ịdị irè nke ụdị itinye ego ego.
A ga-ahụ ọtụtụ uru dị iche iche na ígwè ọrụ ụgbọ ala:
- nke mbụ, ha na-eme ka o kwe omume ịmepụta ọnụahịa ka mma nke akụ, ọnụ ahịa na-agbanwe agbanwe na-aga n'ihu na ahịa ahịa,
- ahịa na-aghọ mmiri mmiri, mfe ịzụta na ire
- ha na-ebelata ọnụ ahịa azụmaahịa maka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu
Kedu ụdị ndị mmadụ nwere mmasị na ịzụ ahịa ígwè ọrụ taa?
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị ndị ọchụnta ego dị ize ndụ na-eji robọtụ azụmaahịa akpaaka:
Ndị mmadụ na-achọ ụzọ ha si enweta ego dị iche iche
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọkwa itinye aka n'ịzụ ahịa ka ha wee nwetakwuo ego. Robots ịzụ ahịa bụ ezigbo ihe ọzọ na nke a n'ihi na ha na-enye gị ohere itinye ego n'ahịa ego na-enweghị ọtụtụ nkà dị ka ndị ahịa ọkachamara.
Anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa na-eji ígwè ọrụ ụgbọ ala, dị ka ọ dị na ígwè ọrụ ndị m na-ewetara gị na ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a. N'ezie, ịzụ ahịa akpaghị aka na-achọ obere ọrụ ma na-enye ohere ịmepụta nnukwu ego. Ndị ahịa ka na-akpachapụ anya iji họrọ rọbọt azụmaahịa na-enye akara ngosi na uru.
Ndị na-achịkwa itinye ego na ego
Ndị na-achụ ego na-eche mgbe niile maka ohere iji gbanwee isi obodo ha. Robzụ ahịa mgbatị bụ usoro nke na-adọta ụdị profaịlụ a. N’ezie, mgbe ndị ọchụnta ego a rutere ezigbo rọbọt, ha anaghị ala azụ itinye ego buru ibu.
Gini mere m ji nye enyemaka m n'efu?
Ihe mgbaru ọsọ m bụ ịkwado gị n'ịdenye ígwè ọrụ ndị a na-eweta. Site na saịtị m, naanị m na - egosi gị igwe eji arụ ọrụ m nyochara maka ọtụtụ izu. N'ezie, enwere nsogbu mgbe niile n'ihi na, ka anyị cheta, robot ọ bụla na-azụ ahịa na-anọgide na-etinye ego dị ize ndụ ma nwee ike iwepụta ihe nfu.
M na-enye gị ozi niile ịchọrọ ịmalite na azụmaahịa akpaka, na nghọta zuru oke. Ebumnuche bụ ka ị mata ihe ị na - abanye n’enweghị ihe ịtụnanya na - adịghị mma mgbe ị bịarutere.
Kemgbe ndụ m, ọ na-adịkarị m ka m so nyere ndị nọ m gburugburu aka. Ọ bụ otu ihe ahụ na saịtị ahụ Robots-Trading.fr. Eziokwu dị mfe nke ịmara na m na-esonye na mmepe nke ọrụ gị bụ ezigbo afọ ojuju nye m.
Ịzụ ahịa na cryptocurrencies aghọwo ezigbo mmasị kemgbe 2017. Ejila m ọtụtụ awa nyochaa ahịa ọhụrụ ndị a na ebe ọhụrụ nke ntinye ego na-esi na ha pụta. Ugbu a, ebumnobi m bụ ịkọrọ gị agụụ a ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya.
Otsdị bots ahịa dị iche iche dị ugbu a na ahịa
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị ahịa ígwè ọrụ. Nkọwa nke ígwè ọrụ ndị a dịgasị iche dịka mmepe ahịa. Yabụ, ụfọdụ ahịa na-akwụsi ike ebe ndị ọzọ ga-enwe usoro pụtara ìhè karị, nwekwuo ike.
Robots azụmaahịa na-anọpụ iche
Ụdị rọbọtụ azụmaahịa na-elekwasị anya kpọmkwem n'ahịa ndị kwụsiri ike na-adịghị agbanwe agbanwe. Robots ndị a na-ere ahịa na-adabere na njirimara teknụzụ (usoro nke isi ihe na-enye ohere nyocha nke nchekwa ngwaahịa ahịa iji buru amụma ụzọ nke ọnụahịa ga-esi pụta). The Range ụdị trading robot ga-enyocha teknụzụ ndị a na-aga n'ihu ma na-eme ihe ịzụrụ na ire ere mgbe a zụrụ ahịa ma ọ bụ buru oke ibu.
Robzụ ahịa mgbatị maka omume na-eso
Nke a na ụdị nke trading robot ga-eme ka hụ na ọnọdụ nke na-agbala na ahịa site oghere ọnọdụ ndị na-eso na-achị na-emekarị ya. Ya mere, oge ọ bụla robot chọpụtara otu omume nwere ike ịba uru, ọ ga-emepe ma ọ bụ mechie ọnọdụ. Rịba ama na ọ na-eburu n'uche ihe mgbaàmà ndị na-adịghị emegide omume ahụ.
Nnukwu ụgbọ okporo ígwè na-ere ahịa (THF)
Ha bụ ndị kasị asọmpi trading ígwè ọrụ na-. Ọ bụ ụlọ ọrụ ego na-ekekarị ha. Ha na-enwe ike ịme iwu na obere sekọnd ole na ole (scalping). Nzube nke elu ugboro trading bụ na-erigbu obere mgbe fluctuations.